काठमाण्डौमा घरबेटीले यौ’न’क’र्मी हो भन्ने थाहापाएपछि गरे यस्तो व्यवहार…! - News20 Media
March 9, 2020 March 9, 2020 N20LeaveaComment on काठमाण्डौमा घरबेटीले यौ’न’क’र्मी हो भन्ने थाहापाएपछि गरे यस्तो व्यवहार…!
एजेन्सी। पार्वती (नाम परिवर्तन) व्यावसायिक यौ’नक’र्मी हुन्। यही कामले उनको घरपरिवार चलेको १० वर्ष भयो। यस बीचमा उनी काठमाडौँको सयभन्दा बढी ठाउँमा डेरा सरिसकिन्। ‘घरबेटीले यौ’नक’र्मी भन्ने थाहा पाउनेबित्तिकै घरबाट निकालिदिन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘समाजले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो हुँदैन। हामीलाई हेर्दै कानेखुशी गर्ने धेरै हुन्छन्। जता गए पनि हामीले ठक्करैठक्कर खानुपर्छ।’